उमेर बढ्दै जाँदा यी हुन् जवान देखिने प्राकृतिक उपाय ! – Etajakhabar
उमेर बढ्दै जाँदा धेरैमा स्वाभाविक उमेरभन्दा कम देखिने रहर जोकोहीलाई लाग्न सक्छ । मानिसहरू त्यसका लागि विभिन्न कस्मेटिक प्रडक्ट प्रयोग गर्छन् । तपाईंले कृत्रिम होइन, प्राकृतिक कुराको प्रयोगबाट पनि आफूलाई जवान देखाउन सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि केही कुरामा ध्यान दिनुस् :
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ०६, २०७५ समय: ३:२१:५१
आँप एक फाइदा अनेक, फलको राजा आँप खाँदाका यस्ता छन् फाइदै फाइदा
सर्पले टोकेमा तत्काल के गर्ने ? कसरी घरमै अपनाउन सकिन्छ प्राथमिक उपचार, समयमै उपाचार नभए ज्यानै जान सक्छ
एलर्जीले सताएको छ ? एलर्जीबाट कसरी बच्ने , एलर्जीको बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने यी कुराहरू जान्नुहोस्
घरमै यसरी बनाउनुहोस् मुखै रसाउने ट्वाक्क अमिलो पिरो चटपटे (भिडियो सहित)
दाँत पहेँलो भएर हाँसो लुकाउने गर्नुभएको छ ? यस्ता छन् पहेँलो दाँत सेतो बनाउने घरेलु विधि